Kaararka luqadda ee barashada luuqad shisheeye
Kaararka luqadda ee barashada luuqad shisheeye waa habka ugu fudud iyo kan ugu badan ee is-barashada. Hal dhinac wuxuu leeyahay erey adag, dhinac kalena wuxuu leeyahay macnaha ama tarjumadiisa.
Ka dib markaad sameysid shukulaato, waxaad bilowdid inaad fiirisid kaararka, si tartiib ah u dhigo wixii aad horey u soo baratay, ilaa aad ka baratay gogoldhiga oo dhan.
Ka dib markii ay ku dhajiyeen 10,000 eray oo cusub iyo iyaga oo ku adeegsanaya dhaqanka luqadda, waxaan qori karaa sheeko ku saabsan habkaygaygu, kaas oo aan rajeynayo inuu kaa caawiyo inaad ku dhex lumiso waddo isku mid ah waxtarka ugu sarreeya, waqti gaaban iyo qalad yar.
Marka hore, waxaan isku dhajiyey bartilmaameedka barashada 500 luqada ugu badan ee loo isticmaalo Ingriiska waxaana laga helaa tirakoobyada ereyada ugu badan ee la isticmaalay, oo lagu saleeyay cilmibaaris.
Markaad sameysey liis eraygan, waxaan bilaabay inaan abuuro kaararka luqadda waraaqaha, si loo kala qaybiyo maraqyada oo barto.
Marka goolka la gaarsiiyo, waxaan ogaaday in aqoonta aqoonta Ingiriisiga ah, waxaad u baahan tahay inaad ogaato ugu yaraan 5,000 oo erayo kala duwan.
Maqnaan-la’aanta ah ee isticmaalka dhowr mitir oo kaararka waraaqaha ah ayaa ii riixay inaan soo saaro codsi mobile ah oo haboon ujeedadaas.
Waxay ahayd lagama maarmaan in la go’aamiyo hawlaha muhiimka ah si loo gaaro natiijada ugu badan. Sidaa darteed, ka hor inta aan la bilaabin horumarinta arjiga, waxaan soo ururiyay liis dhamaystiran oo ah hawlaha iyo qalabka loo baahan yahay:
1. Awood u leh in la abuuro oo lagu kaydiyo tiro aan xad lahayn oo kaararka ah
2. Aruurinta kaydinta iyo falanqaynta mugga qalabka wax bartay
3. Awood u lahaanshaha inaad ka soo dejiso xogta dukumiintiga qoraalka ah ee shaqeynta kartida si loo abuuro kaararka si aad u sameyso waxyaabahaaga waxbarasho
4. Qodobbada tooska ah ee kaadhadhka oo dhan ee amarka la rabo, oo leh qiyaasta ku-celceliska ee la isku-hagaajin karo iyo hawlaha la adeegsanayo cod-bixiyaha maqalka si loo dhageysto walxaha la baaray wakhti kasta
5. Abuurista xog ururin munaasab ah oo ku saabsan dhinacyada kala duwan ee nolosha
6. Abuurista qalabka flashcards ee sawirada si loo abuuro ururo leh muuqaal
7. Hawlgalka la’aantiis internetka iyo qaabka diyaaradda
8. Ku keydinta xayeysiinta dhammaan ereyada adag ee la xariira
9. Si fudud loo isticmaalo
10. Leylisyo maalinle ah oo la aqbali karo oo loogu talagalay xasuusinta erayada
11. Ogeysiinta jimicsiyada qorsheysan
12. Ereyga kala-soocidda kala duwan
13. Kaararka kaadhadhka loo wareejiyo
14. Awoodda inaad barato luuqadaha shisheeye iyo dhowr luqadood oo siman
Ka dib markii ay go’aamiyeen hadafyada, waxaan bilaabay inaan si firfircoon u abuuro wax cusub.
Iyada oo haysata waayo-aragnimo yar oo horumarinta codsiyada nidaamka hawlgalka Android, waxaan bilaabay inaan ka shaqeeyo qaybta koowaad ee LingoCard ee casriga ah iyo dhowr bilood oo ah codsigii ugu horreeyay ee moobiilka ee leh kaararka luqadda iyo hal dukumiinti (hal buug oo kaarar ah) ayaa diyaar ah. Si loo horumariyo qalabyo badan oo adag, waxaan bilaabay inaan ka wada xaajoodo xulashooyinka fulinta oo leh xirfadleeyaal xirfadley ah oo aan ogaaday Dadku waxay jecelyihiin fikradayda, maaddaama ay dhiirigeliyayaashu bilaabeen inay ku biiraan mashruuca. Kadib fulinta fikradaheena, waxaan go’aansanay inaanan joojin oo aan horumarinno dhowr qalab oo u gaar ah laba nidaam oo kala duwan: Android iyo macruufka. Waxaan ku soo bandhigay barnaamijkayaga Google Play iyo Apple Store lacag la’aan.
Muddo dhowr bilood ah, tobanaan kun oo qof oo adduunka ah ayaa bilaabay inay isticmaalaan barnaamijyadeena anaga oo aan haysan wax khidmad ah, waxaan helnay warqado badan oo mahad-celin ah, calaamadaha-qaladaadka-waraaqo iyo talooyin ku saabsan sida loo horumariyo alaabta, taas oo aan mahadsanid. Natiijo ahaan, waxaan haynaa shaqooyin badan iyo fikrado cusub.
Markaad ku qanacdo jawiga luqadda, waxaa jira fahan macquul ah baahida loo qabo in si deg deg ah loo soo koobo jumlado. Waa fahamka jumladaha iyo odhaahaha aasaasiga ah ee ka dhigaya hadalkaaga mid la aqbali karo wada sheekeysiga iyo turjumid degdeg ah. Sidaa darteed, waxaa la go’aamiyay in la isku daro kaararka jumlada, weedhaha iyo qaylada. Hadda, codsigeena waxaad ka heli kartaa boqolaal kun oo kaararka luqadda leh farabadan erayada iyo weedho kala duwan.
Dhammaan kaararka luqadda ee ku jira codsiyadayada ma lahaan wax xaddidan oo lagu kordhinayo qoraalka, sidaas darteed waxaa suurtagal ah in la abuuro flashcards leh sheekooyinka heesahaaga ama cutubyada aad ka hesho buugaagta aad ugu jeceshahay. Ka dib markaad ku darto qoraalo badan, waad soo rogi kartaa ama hoos u dhigi kartaa oo waxaad dhageysan kartaa qoraalka hadalka.
Flashcards ayaa diyaar u ah tababbarka laba nooc:
1. Liiska noocyada kaararka, halkaas oo aad ka arki kartid dhammaan kaararka isla markiiba geli diiwaanka kor u kaca. Kaadh kasta wuxuu si toos ah uga leexan karaa liiska adigoo ku xiraya badhanka foorarka.
2. Habka kaadhka furan. Halkaan waxaad ku furi kartaa kaadhka si aad u aragto nuxur qoraaleed oo aad u kala dhufan kartid dhamaan kaadhadhka bidixda / midigta. Habkani, waxa kale oo suurtagal ah in lagu diyaariyo kaararka, u diro xog ururin firfircoon oo waxbartay. Waxa kale oo suurtagal ah in lagu soo lifaaqo sawirrada iyo sawirrada flashcard si loo abuuro “muuqaal muuqaal ah”. Kaadh kasta waxa loo geliyaa dhinaca kale adigoo si fudud u xoqaya meel kasta oo ka mid ah qoraalka.
Miiska codsiga, waxaad ka heli kartaa goobo badan oo loogu talagalay hababka tababarka ee kala duwan.
Ka shaqaynta dhibaatada waqtiga la’aanta waxbarashada, waxaan go’aansanay inaan abuurno ciyaaryahan codad gaar ah leh oo ku dhajin doona qoraal kasta iyo kaar kasta oo loo sameeyay qaab kasta, beddelidda erayada ajnabiga ah iyo tarjumadooda. Sidaa darteed, luuqad shisheeye ayaa loo baran karaa si la mid ah dhageysiga muusikada meel kasta iyo waqti kasta. Hadda qalabkan waxaa lagu hirgeliyaa suurtagalnimada in la dhegaysto ilaa 40-50 luqadood oo ajnabi ah, iyada oo ku xidhan qalabka iyo moobilka loo isticmaalo. Waxaan aaminsanahay in muddo yar ka dib uu ciyaaryahankeena la shaqeyn doono dhamaan luqadaha la yaqaan ee adduunka.
Waxaa sidoo kale muhiim ah in la xusuusto ereyada, tusaale ahaan, sida xarfaha loo yaqaan ‘alphabetype’, oo ku qoran habka loo yaqaan ‘alphabetype’, ‘random’, mawduucyada, iwm.
Waxaad baran kartaa isku-darka 67-luuqadood oo ajnabi ah oo leh qalabkayaga. All flashcards aad ku kaydsan yahay server ah cloud, si aad u bedeli kartaa qalabka, waxaad u baahan tahay inaad xasuusato email aad iyo password.
Mustaqbalka dhow, waxaan qorsheyneynaa inaan horumarinno qalab loogu talagalay raadinta dadka ku hadla afkooda hooyo iyo ficilka shirarka fiidiyowga, kaas oo aad ka abuuri kartid kaararka luqadda cusub dhammaan wadahadalka ama casharka.
Intaa waxaa dheer, iyadoo la adeegsanayo flashcards our waxaad ku dhaqmi kartaa dhawaaq saxda ah erayada ama weedhaha. Si arrintan loo sameeyo, waxanu hirgelineynaa oo aan horumarinnaa qalabka leh aqoonsi hadalka ah oo dhageysan doona dhawaaqaaga oo tusi khaladaadkaaga.
Isticmaalka nidaamka Leitner.
Nidaamka Leitner waa hab aad loo isticmaalo oo si wax ku ool ah u adeegsanaya flashcards kaasoo soo jeediyay wariyihii cilmiga sayniska jarmalka Sebastian Leitner ee 1970meeyadii.
Waa hirgelinta sahlan ee mabda’a ah ee ku-soo noqnoqonta, halkaas oo kaararka dib loo eegayo marka la kordhiyo waqtiga.
Qaabkan qaabka flashcards waxaa loo kala soocaa kooxo iyadoo loo eegayo sida wanaagsan ee ardaygu u yaqaan mid kasta oo ka mid ah sanduuqa wax barashada ee Leitner. Ardaydu waxay isku dayaan inay xusuustaan ​​xalka ay ku qoran tahay flashcard. Haddii ay ku guuleystaan, waxay u diraan kaadhka kooxda kale. Haddii ay ku dhacaan, waxay dib ugu celiyaan kooxda koowaad. Koox kasta oo ku guuleysata waxay leedahay muddo dheer ka hor intaan ardaygu u baahnayn inuu dib u eego kaararka. Habkan waxaa loo isticmaali karaa labadaba barashada erayada luuqad shisheeye, iyo xusuusinta macluumaadka kale.
Waxaad awoodi doontaa inaad isticmaasho nidaamka Leitner codsigeena. Flashcards ayaa loo wareejin karaa kooxo dhowr ah. Tusaale ahaan, waxaad ku dhejin kartaa walxaha tababarka ama codsashada oo keliya si aad u doorato luuqad diyaar ah, ka dib markaad u gudubto kaararka, waxaad u wareejin kartaa xogta “daraasadda”, oo ka tagta gundhiga haddii aadan isla markiiba xusuusto, ama u wareejinta ereyada ugu adag ee xogta firfircoon. Ka dib markaad horey u barato xogta firfircoon, ka dibna la doorto iyo waqti ka waqti, dib u habee alaabta la bartay ee database-ka la baray.
Maskaxdeena ma fahmayo sababta ay u baahan tahay in la xasuusto tiro badan oo erayo cusub ah oo si joogto ah isku dayey in ay ka takhalusaan macluumaadka aan loo baahnayn. Si looga gudbo dhibaatadan, waxaan u baahanahay inaan si macno leh maskaxda ugu dhigno si uu u sameeyo. Kaliya sawir in aad xusuusato kun oo erey cusub, waxaad u baahan tahay inaad abuurto boqolaal kun ama xitaa malaayiin nucubyo cusub oo cusub ee madaxa! Natiijo ahaan, waxaan hubaal noqonaynaa in aanu noqonno mid dareen leh.
Si loo gaaro hadafyadan, waxaanu horumarineynaa barnaamijyadeena gaarka ah ee la barbar dhigi karo si loo abuuro xiriirro cusub oo dhexdhexaad ah maskaxda – waa inaad soo qaadataa wax sax ah oo aad ku dadaaleyso sidii aad u gaari lahayd natiijada ugu fiican.
Andrew Kuzmin 23.06.2018